WARBIXIN: Awoowe, Aabbe & Wiilkooda – Sida reer Maldini ay u galeen Taariikhda Kooxda faca weyn ee AC Milan – Gool FM
WARBIXIN: Awoowe, Aabbe & Wiilkooda – Sida reer Maldini ay u galeen Taariikhda Kooxda faca weyn ee AC Milan
Haaruun October 4, 2021
(Milan) 04 Okt 2021. Warbixintan waxa aan uga hadli doonno sida reer Maldini ay u galeen taariikhda naadiga AC Milan kaddib markii saddex jiil oo reer Maldini ah ay isu beddeleen ama sidii qori isku dhiibkii ay ugu wada ciyaareen kooxdan faca weyn ee Rossoneri.
Kulankii dhowaa ee Serie A-da Talyaaniga oo ay wada yeesheen kooxaha AC Milan iyo Spezia, kaas oo ay 2-1 guushu ku raacday naadiga Milan waxaa kulankaasi uu ahaa mid dhadhan gooni ah lahaa oo taariikhda baal dahab ah ka galay, maadaama ciyaartaa laacibiintii ciyaareysay lagu soo billaabay wiilka da’da yar ee Daniel Maldini oo kulankaasi uu ahaa kiisii ugu horreeyay ee Line Up-ka ama safka hore lagu soo billaabo.
Daniel Maldini waa 19 jir ka ciyaara Khadka dhexe ee wax weerara, waxaana dhalay daaficii hore ee xulka Talyaaniga iyo kooxda AC Milan Paolo Maldini oo ciyaaraha ka fariistay 2009-kii kaddib markii uu 25 xilli ciyaareed u dheelay AC Milan illaa uu ka gaaray da’da 41 sanadood.
Goolkii uu Maldini yare ka dhaliyay Spezia ayaa yimid 13 sano iyo 179 maalmood kaddib goolkii ugu dambeeyay ee uu aabihiis Paolo Maldini ka dhaliyay Serie A-da Talyaaniga, gaar ahaan ciyaartii Milan iyo Atalanta 2008, sidoo kale waxaa goolka Daniel Maldini uu ku soo aaday 60 sano iyo 22 maalmood kaddib goolkii uu awowgii Cesar Maldini ka dhaliyay Catania sanadkii 1961-kii.
Sidaasi waxaa qoyska reer Maldini ay ku sii wadeen dhaxalkii soo jireenka ahaa iyo jaceylkii aan dhammaadka lahayn ee ay u qabeen kooxda AC Milan, waa sida koox ay u soo ciyaareen Awoowahaa, Aabahaa, adiguna aad haatan u dheelayso.
Paolo Maldini oo haatan ah agaasimaha dhanka farsamada Milan ayaa waxa uu in ka badan 900 oo kulan u soo saftay AC Milan ayaa waxaa daawanayay kulankaasi, isagoo farxad is heyn kari waayay markii wiilkiisa Daniel uu dhaliyay goolkii koowaad ee kulankii Spezia, kaamirooyinkuna waxa ay qabanayeen Paolo Maldini oo dabaal degaya.
Qisada reer Maldini ayaa noqonaysa mid looga sheekeyn doono jiilasha soo socda, maadaama reer Maldini ay noqdeen qoyska keliya ee saddexdiisa jiilba ay goolal ka dhaliyeen Serie A-da weliba iyagoo u ciyaaray hal koox (AC Milan).
Cesar Maldini oo ah awoowihii sheekadan billaabay ayaa ka tirsanaa xulka Talyaaniga iyo kooxda AC Milan oo uu u ciyaaray intii u dhexeysay 1954-kii illaa 1966-kii, halka wiilkiisa Paolo Maldini uu isna kooxda keliya ee uu ciyaarihiisa ku bilaabay kuna dhameeyay ay tahay Milan 1984-2009.
Taariikh ahaan qoyska reer Maldini waxay ka soo jeedaan Islofeeniya, kuwaas oo sanado badan ka hor u soo hijrooday Talyaaniga iyagoo degay magaallada Tiriste ee waqooyiga Talyaaniga, halkaas oo uu ku dhashay Cesar Maldini sanadkii 1932-kii, kaddibna waxa uu bartay kubadda cagta isagoo noqday daafac ka soo bilaabay kubadda kooxda Terestina, kaddibna uga sii gudbay kooxda AC Milan oo uu daafac ahaan ugu ciyaarayay 12 sanadood.
Paolo Maldini ayaa isna funaanadda ka dhaxlay Aabihii, waxaana uu sii waday shumicii reer Maldini isagoo sida aabihii noqday daafac ka mid ah kuwii ugu fiicnaa ee soo maray taariikhda AC Milan iyo Xulka Talyaaniga.
Sidaas ayaa saddex jiil ay isugu gudbiyeen khibraddoodii, waxaana qoyska reer Maldini aad looga qadariyaa Gudaha Talyaaniga, iyadoo kooxda AC Milan ay haatan qorsheyneyso in ay taallo sharafeed u dhisto xiddigihii reer Maldini ee ka dambeeyay geedkan miraha wanaagsan dhalay haddii ay ahaan lahayd heer qaran iyo heer naadi labadaba.
Intaas waxaan ku soo geba gebeyneynaa qisada saddexdii jiil ee reer Maldini min Awoowe, Aabe illaa inankoodii ugu dambeeyay kuwaas oo dhammaantood u soo ciyaaray kooxda AC Milan.
Kooxda Real Madrid oo xiiseynaysa saxiixa xiddig ka tirsan Chelsea... (Booskee ayuu ka ciyaaraa?)
“Waxaan codsaday inaan baxo... waxayna iga dhigeen tuug” – Mbappé